बिहे गर्नु अगाडि युवतीलाई सोध्नुपर्ने महत्वपुर्ण ५ प्रश्नहरु यस्ता छन् ! जानी राखौ « Sajha Page
October 23, 2018 Tue
बिहे गर्नु अगाडि युवतीलाई सोध्नुपर्ने महत्वपुर्ण ५ प्रश्नहरु यस्ता छन् ! जानी राखौ
प्रकाशित मिति: October 25, 2017
टिप्स । परिबर्तनशिल समय संगै आधुनिक समाजमा मागी विवाह भन्दा प्रेम बिबाह धेरै हुने गरेको पाइन्छ । तर यदि तपाईहरु मागी विवाह गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने केही महत्वपुर्ण प्रश्नहरु युवतीलाई सोध्नुहोस् ।
एक अर्काको आनीबानी थाहा पाउन वर्षौंसम्म लाग्न सक्छ । तर केही प्रश्न यस्ता छन् जुन प्रश्नबाट तपाई क्षण भर मै हुने वाला जीवन साथीको सम्पूर्ण आनीबानी थाहा पाउन सक्नु हुन्छ ।
यसले तपाईको जीन्दगीमा नयाँ मोड ल्याउन सक्छ । विहे गर्नु भन्दा पहिला महिलालाई सोध्नुपर्ने प्रश्नहरु यस प्रकार रहेका छन् ।
१- फ्यूचर प्लानिङको बारेमा पनि छोटो प्रतिक्रिया लिनुहोस् । उसको पहिलो प्राथमिकता के हो ? भन्ने पनि बुझ्नुहोस् । याद गर्नुहोस् फ्यूचर प्लानिङको बारेमा उनले भनेको छोटो प्रतिक्रिया नै महत्वपूर्ण हुनसक्छ ।
२- सबै भन्दा पहिला केटीको शिक्षाको बारेमा जरुर सोध्नुहोस् । सफल जीवनको पहिलो कडि नै शिक्षा हो । भनिन्छ घरमा महिला शिक्षित भए पुरै परिवार शिक्षित हुन्छ ।
३- आर्थिक मामलामा उनको धारणा के हो त्यो पनि बुझ्नु होस् । तपाईको जिन्दगी सफल पार्नका लागि आर्थिक चिजको भूमिका पहिलो र महत्वपूर्ण हुने गर्छ । तर याद गर्नुहोस् मनी माइन्डेट युवति छ भनेपनि तपाईको जीवन सफल नहुन सक्छ ।
४- उनीसँग के कुरा गर्दा नजिक हुन सकिन्छ जरुर सोध्नुहोस् । उसका साथीहरु कस्ता कस्ता छन् ? भन्ने पनि बुझ्न आवश्यक छ । उनका साथीहरु भनेको उनले सिक्ने खुल्ला विद्यालयहरु पनि हो । किनकी उसको बाल्यकाल त्यही बितेको छ ।
५- त्यसपछि एकअर्काको रुचीहरुको बारेमा सोध्नुहोस् । रुची हेर्दा सानो सानो देखिएपनि मानिसको संस्कार र संस्कृतिसँग जोडिएर आएको हुन्छ । तपाई यसलाई कमजोर सोच्दै नसोच्नुस् । एक अर्काको रुचीहरु मिल्यो भने मात्र जीवन सफल हुन सक्छ ।
विकास बैंकले शेयर कर्जा प्रवाह गर्दै
–युवराज पाण्डे बुटवल, ८ असोज । रुपन्देहीमा विकास बैंकले शेयर कर्जा प्रवाह गर्न थालेका छन् । शेयर बजारमा सुधारका सङ्केत
शेयर बजार: सामान्य गिरावट
काठमाडौँ, ४ असोज । धितोपत्र बजारमा आज शेयरको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोवार मापक
आकाशियो डलरको मूल्य ! अमेरिकी डलरको भाउ ११७ पुग्यो
अमेरिकी डलरको मूल्य नेपाली बजारमा आकाशिएको छ। १ डलरबराबर नेपाली रुपैयाँ ११७ पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार डलरको
नेदरल्याण्डमा चल्छ भगवान रामको नामको मुद्रा ! कति पर्छ मूल्य ?
एजेन्सी। रामायणका मर्यादा पुरुषेत्तम भगवान रामको जन्म स्थान अयोध्या भारतको राजनीतिक विषय पनि हो । त्यहाँका अधिकांश जनता भगवान रामलाई
यस्तो छ आजको विनियम दर !
काठमाडौं । आज भाद्र २७ गते विदेशी मुद्राको विनियम दर नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विदेशी मुद्रा विनिमयदर अनुसार साउदी अरवको
नेपाली बजारमा डलरको भाउ अकासियो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा डलरको भाउ आकासिन थालेको छ । आज नेपाल राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर १ को खरिद दर
मेरो भिनाजुसँग पहिलो एक रात मेरो यौन कथा !
बेगनास तालमा ८ जना डुबेको घटना : कमलराजलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो, नडाकेका रबि किन गए दर खान ? (भिडियो)
नेपालको इतिहास बोकेको अत्यन्तै दुर्लब तस्बिरहरु हेर्नुहोस, जुन अहिले हेर्दा निक्कै लोभ लाग्दा छन (३२ फोटो सहित)
‘छ्या भिनाजु के गर्नुभएको यस्तो ? म निथ्रुक्कै भिजिसकेकी छु’ - पुरा पढ्नुहोस
रामपुरदेखि डेढगाउँ हुँदै काठमाडौँसम्म बस सेवा शुरु गरेको छ
दशैं किन बहिष्कार, किन स्वीकार ?
दात किराले खाएर निकै तनावमा हुनुहुन्छ ? एक रातमै दात खाने किरा चट पार्ने घरेलु उपचार थाहा पाई राख्नुहोस (भिडियो सहित)
५० बर्ष भन्दा पुरानो काठमाडौँको दुर्लब फोटोहरु (ठाउँको नाम सहित)
एस्तो अचम्म बरफ बाट विश्व इन्धन आपूर्ति
यौनाङ्ग स्वस्थ्य राख्न महिलाले जान्नै पर्ने आठ कुरा
यौन जिज्ञासा-मुख मैथुनगर्दा के विर्यको सेवनले असर पुर्याउला ??यौन विशेषज्ञको सल्लाह सुन्नुहोस(भिडियो सहित)
कन्डमको प्रयोगले यौन सन्तुष्टि दिन्छ कि दिदैन ? लिङ्गको आकारले थाहा हुन्छ सेक्स अवधि
संचालक तथा सम्पादक : जिवन राई, सूचना बिभाग दर्ता नं : १९४/०७३/७४, ठेगाना: ठेचो, ललितपुर, फोन : ९८६००३०३०३, इमेल : [email protected],
विज्ञापनका लागि : फोन- ९८६००३०३०३ , इमेल- [email protected]
2018 | Sajha Page Media Pvt. Ltd.